Ingabe Umjikelezo Owodwa We-Steroids Uzokwenza Noma Yini - BikeHike
Umjikelezo wakho wokuqala we-steroid kufanele ube isikhathi esingakanani?
Uyibona ngokushesha kangakanani imiphumela evela kuma-steroids?
Iyiphi i-steroid engcono kakhulu yabaqalayo?
Imaphi ama-steroids abakhi bomzimba abawathathayo?
Imuphi umjikelezo we-steroid ongcono kakhulu?
Ingabe ama-steroid asebenza ngaphandle kokusebenza?
Ungabona kanjani uma umuntu ethatha ama-steroid?
Kungakanani ongakuthola ngaphandle kwama-steroids?
Kwenzekani uma uyeka ukuthatha ama-steroid?
Ingabe i-creatine iyi-steroid?
Kufanele ujikeleze isikhathi esingakanani i-testosterone?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-testosterone enanthate ingene?
Iyiphi i-steroid ephephile yokwakha imisipha?
Uyini umjikelezo wenqwaba omuhle?
Ungakwazi yini ukugijima i-Tren ne-Deca ndawonye?
Ingabe bonke pro bodybuilders zisebenzisa steroids?
Ungakwazi yini ukuthola iphakethe eliyisithupha ngaphandle kwama-steroid?
Kwenzeka kanjani ukuba abakhi bomzimba babe bakhulu kangaka?
Ubanjwa kanjani ngokushesha?
Kungcono ukuba mkhulu noma unciphe?
Ngingayithola kanjani i-abs ephukile?
Ingabe ama-buff dudes athatha ama-steroid?
Ngokuvamile, abasebenzisi bazothatha ama-steroids amaviki ayisithupha kuya kwayi-16 ngesikhathi, kulandelwa amasonto ambalwa okuthatha imithamo ephansi noma bangabi nawo nhlobo ama-steroid. Abasubathi abaziyo ukuthi bazohlolwa - isibonelo, ngesikhathi somcimbi othile noma umqhudelwano - bazobeka isikhathi somjikelezo wabo ngethemba lokuphasa ukuhlolwa kwezidakamizwa.
Ukuhlakanipha okutholiwe ukuthi i-testosterone kumele ijovwe masonto onke okungenani amaviki angu-10. Nokho usosayensi wezemidlalo uRobert Weatherby waseSouthern Cross University eLismore, eNew South Wales, e-Australia, owenze lolu cwaningo, uthole ukwanda okukhulu kokusebenza kwenzeke ngemva kwamasonto amathathu nje kuphela.
- i-anavar (i-oxandrolone) iphephe kunazo zonke i-steroids yabaqalayo, futhi imnene kakhulu kune-testosterone. Izinzuzo ze-anavar yilezi: it. Njengoba i-anabolic steroids ingakhuphula imisipha yemisipha, ingaba enye indlela engenzeka. Kodwa-ke, njengawo wonke amanye ama-oral steroids, inobuthi besibindi kakhulu.
Nalu uhlu lwama-anabolic steroid ajwayelekile athathwe namuhla: i-anadrol, i-oxandrin, i-dianabol, i-winstrol, i-deca-durabolin, ne-equipoise.
U-Anavar kungenzeka ukuthi i-steroid engcono kakhulu yokulahlekelwa isisindo, umjikelezo we-steroid ongcono kakhulu wokunciphisa umzimba. I-Anavar idumile phakathi kwabakhi bomzimba ngoba iphinde isebenze njenge-diuretic ukuze ulahlekelwe amanzi futhi, amaphilisi e-steroid angcono kakhulu ukuze azuze imisipha. Kulabo abafuna lokho kubukeka okuhlanzekile nokomile uma usesiteji, u-Anavar ulungile.
I-Anabolic steroids, ebizwa nangokuthi i-anabolic-androgenic steroids (i-aass), ingakha imisipha futhi ithuthukise ukusebenza kwezemidlalo, kodwa ingaba nemiphumela emibi kakhulu, ikakhulukazi uma isetshenziswa. I-steroids izokwenza ube mkhulu, usheshe, uqine, futhi ukhulise umsebenzi we-neuromuscular ngisho nalapho kungabikho ukusebenza.
Izimpawu Ze-Steroid Sebenzisa Izinduna. Ukukhula ngokushesha kwemisipha/isisindo. Amabele akhulisiwe (emadodeni) Paranoia. Ukungabi namandla. Ukukhula kwezinwele zobuso (kwabesifazane).
FFM: (bodyweight x (100 – bodyfat percent in %)) / 100 ∆ Baphethe ngokuthi abasubathi abangawathathi ama-anabolic steroids bane-Index of around 25 at max. Abasebenzisi be-Steroid bangadlula lelo nani, ngokuvamile ngokuningi. Lokhu kuholela emcabangweni wokuthi i-FFMI engaba ngu-25 ingumkhawulo wemvelo.
Ukusetshenziswa kwe-steroid akukwazi ukumiswa kungazelelwe; ukwehlisa umuthi kunikeza izindlala ze-adrenal isikhathi sokubuyela emaphethini azo ajwayelekile okukhishwa. Izimpawu zokuhoxa (ubuthakathaka, ukukhathala, ukuncipha kwesifiso sokudla, ukuncipha, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, ubuhlungu besisu) zingalingisa ezinye izinkinga eziningi zezokwelapha.
Kuyinhlanganisela yama-amino acid akhiqizwa isibindi, izinso namanyikwe. I-Creatine ayiyona i-steroid—itholakala ngokwemvelo kusisipha kanye nasenyameni ebomvu nenhlanzi, nakuba isezingeni eliphansi kakhulu kunefomu lempushana elithengiswa kumawebhusayithi okwakha umzimba kanye naku-GNC yangakini.
I-hypothesis evamile iwukuthi ukuphathwa kwe-testosterone kumadoda anempilo, amadala amaviki angu-52 (unyaka we-1) kulandela umjikelezo wamaviki e-4 wokuphathwa kwe-testosterone kanye namaviki e-4 ngaphandle kwe-testosterone (okungukuthi, i-regimen yanyanga zonke yamabhayisikili) izohlinzeka ngezinzuzo ezifanayo emandleni emisipha, ubunzima bemisipha, nokuminyana kwamathambo njengokujwayelekile.
Ukusetshenziswa kwe-testosterone enanthate kuye kwaboniswa ukwandisa kakhulu amandla phakathi kwamaviki e-6-12 wokuphatha (2, 9), noma kunjalo, akucaci ukuthi izinzuzo ze-ergogenic zibonakala yini ngaphansi kwamaviki e-6.
1) I-D-Bal ngo-Crazy Bulk Ngakho akumangazi ukuthi i-D-Bal iyisengezo esithengiswa kakhulu se-Crazy Bulk. Ukuzibophezela kwabo ekuthuthukiseni umkhiqizo wabo nokudala okuthile okukusiza ukuba wakhe imisipha ngendlela ephephile nephumelelayo yingakho sicabanga ukuthi u-D-Bal uyifanele ngokuphelele indawo yokuqala ohlwini lwethu.
Okokuqala, imijikelezo yokunqwabelana esebenza kahle kakhulu imvamisa okungenani iyizinyanga ezi-3-4, uma kungenjalo. Lapho lokhu kungase kube nzima kwabanye abantu ukuthi ngisho noma ungaphezu kwama-macronutrients akho ngendlela emangalisayo, cishe uzozuza amafutha ngenkathi uthola imisipha emjikelezweni omkhulu.
Ingabe I-Deca Ingapakishwa Nge-Tren? Yebo, ingakwazi futhi ibe nomphumela omuhle lapho inqwaba. Ubukhulu namandla okuzuzwayo kuzokwengezwa ngokungafani nokugijima i-tren yedwa. Imiphumela engemihle futhi ngeke ibe nzima kakhulu, uma kuqhathaniswa nokwenza umjikelezo we-tren kuphela (ngaphandle kokucindezelwa kwe-testosterone okwedlulele).
Nakuba ukusetshenziswa kubonakala kuvame kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba abaqhudelanayo - amaphesenti angu-54 alabo abathatha ama-steroids, ucwaningo olulodwa lwathola - alukhawulelwe kuleso sibalo sabantu.
Ngingakwazi ukwakha imisipha futhi ngikhule ngaphandle kwama-steroids? Impendulo ithi yebo. Kodwa-ke, kuyilapho umsebenzisi we-steroid ezokhula kakhulu kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni lokuqeqeshwa akwenzayo, umphakamisi wemvelo udinga ukudlala ngokuseduze kakhulu ukuthi uzivocavoca kanjani, yiziphi izithasiselo okufanele zisetshenziswe futhi kanjani / nini ukudla.
Ngokujima okufushane kodwa okuqine kakhulu kanye nesikhathi esengeziwe sokululama, azicindezeli ngokweqile, kodwa zinikeza imisipha isikhathi esengeziwe sokuphumula nokukhula. Umphumela uba bodybuilders abakwazi ukufeza ikhono labo zofuzo ukuthuthukisa esiphezulu mafutha mass umzimba kanye shape.
Umhlahlandlela Wakho Ophelele Wokuklebhuka Isinyathelo 1: Isitimela Samandla Sokwakha Imisipha. Isinyathelo sesi-2: Sika Amakhalori Ukuze Ulahlekelwe Amafutha. Isinyathelo sesi-3: Yidla Amaprotheni Anele. Isinyathelo sesi-4: Yidla Inani Elilingene Lamafutha Anempilo. Isinyathelo sesi-5: Zama i-Carb Cycling. Isinyathelo sesi-6: Sebenzisa i-Portion Control. Isinyathelo sesi-7: Engeza I-High-Intensity Interval Training (HIIT) Isinyathelo sesi-8: Thola Ukulala Kancane.
Umzimba omncane ungcono kunomzimba omkhulu ngenxa yalezi zizathu: Iguquguquka kakhulu, ikunikeza ithoni ebukeka ngokwemvelo. Kufezwa ngokulahlekelwa kwamafutha angaphandle ukuveza imisipha engaphansi. Kulesi sihloko, uzofunda mayelana nezinzuzo zezempilo zazo zombili izinhlobo zomzimba, ukuthi ungazifinyelela kanjani nokuthi iyiphi oyikhethayo.
Nazi izindlela ezi-8 ezilula zokuzuza i-abs ye-six-pack ngokushesha nangokuphepha. Yenza I-Cardio Eningi. Yabelana ku-Pinterest. Zivocavoce Imisipha Yakho Yesisu. Khulisa Ukudla Kwakho Kwamaprotheni. Zama Ukuqeqeshwa Kwesikhawu Esinamandla Aphezulu. Hlala Hydrated. Yeka Ukudla Okugayiwe. Yehlisa I-Refined Carbs. Gcwalisa ku-Fiber.
Ukusetshenziswa kwe-steroid akukhawulelwe kuma-buff dudes amakhulu. Abafana abaningi abancane bathatha ama-steroids ukuze bazame ukuhlala beqhekekile futhi bathole imisipha ethambile.
Indlela Yokujikeleza I-Steroids
Indlela I-Steroids Ewuthinta Ngayo Umjikelezo Wokuya esikhathini
Umbuzo: Isikhathi Esingakanani Sokujikeleza I-Steroids
Impendulo Esheshayo: Ungawahambisa Kanjani Ama-Steroids Ngokuphephile
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Steroids Ingawuthinta Umjikelezo Wokuya esikhathini
Ingabe I-Steroids Ingakwazi Ukushintsha Umjikelezo Wokuya esikhathini
Umbuzo: Ingabe I-Cycle Trader Ibiza Noma Yini
Impendulo Esheshayo: Ibiza Kangakanani Umjikelezo We-Steroids
Umbuzo: Ungahamba Isikhathi Esingakanani Nge-Steroids
Mude Kangakanani Umjikelezo Woku-1 We-steroids
Umbuzo: Kufanele Uhambe Kangakanani Ngebhayisikili Nge-Steroids
Malini Umjikelezo We-steroids